Soomaaliya, 01 May 2019
Wasiirkii warfaafinta Soomaaliya oo is-casilay
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya, Daahir Maxamuud Geelle ayaa wareysi uu siiyey VOA ku sheegay inuu xilkaas iska casilay.
Ciidamada dowladda oo qabsaday Bariire
Wararka ka imaanaya deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegaya in saakay halkaasi ay weerar ku qabsadeen ciidamada dowladda Federalka Soomaaliya.
Shabaab isku dhiibay ciidamada dowladda
Dhaqanka Iyo Hiddaha, qeybta 469-aad
Dab ayaa caawa ka kacay suuqa Bakaaraha, gaar ahaan agagaarka qeybta Cabdalla-Shiddeyaha. Lama garanayo illaa iyo hadda sababta dhalisay in uu dabkaasi kaco.
Dad ku eedeysan dilka Axmed Dowlo oo xukun lagu riday
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dil ah ku ridday saddex qof oo lagu helay inay horey u dileen nin lagu magacaabo Axmed Mukhtaar Dowlo, bishii Sebtember sannadkii hore.
Qeybo ka mid ah Sanaag oo la geliyey xaalad deg deg ah
Warsaxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in sadex degmo oo ka tirsan gobolka Sanaag oo ay ku jirto magaalada caasimadda gobolkaasi ee Ceerigaabo lagu soo rogay xaalad deg deg ah.
ILEYSKA VOA: Colaadihii ugu waa weynaa dunida